Beauty ब्यूटी पाठ एमिली ब्लन्टबाट सिक्न - मेक अप गर्नुहोस्
Beauty डिभेलबाट सिक्न ब्यूटी लेसन प्रादाको स्टार एमिली ब्लन्ट लगाउँदछ
4 Beauty Lessons Learn From Devil Wears Prada S Star Emily Blunt
जबकि उनी सबैलाई उनको आश्चर्यजनक प्रदर्शन र निर्दोष अभिनय कौशलको साथ मंत्रमुग्ध गर्छिन्, त्यहाँ एमिली ब्लन्टको सहज र अनुहारमा नभएको अनुहारको सुन्दरता देखि धेरै कुरा सिक्न सक्ने छ। यदि कसैले क्लासिक गर्दछ, sass को स with्केतको साथ नाजुक देखिन्छ, यो उनी हो! पर्दामा वा बाहिर उनको हेराईमा हेर्नुहोस्, र तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि उनले सबैलाई सहजै बोक्ने गर्छिन्। ब्लन्टको सुन्दरताको बारेमा सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भने त्यसले आफ्नो प्राकृतिक सुविधाहरूमा घुम्टो लगाउँदैन तर उनी पनि प्रयोग गर्न डराउँदिनन्। उनको केश शैली उनको मेकअप को पूरक पूरक छ र उनी यो सरल, असफल प्रूफ र न्यूनतम राख्छ।
जब हामी ईन्टाग्राममा प्रत्येक खाता डाँक गर्छौं जुन ब्लन्टको दृश्यहरू पोष्ट गर्दछ (उनले अझै पनी उनको उपस्थितिको साथ हाम्रो एसएम फिडलाई आशिष दिएकी छैनन्), हामीले महसुस गर्यौं कि त्यहाँबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। शैतान लगाउँछ प्रादा तारा त्यसो भए, हामी यहाँ जान्छौं!
कम बढी छ
केवल एक चिकनी र निर्दोष आधारको लागि लक्ष्य गर्नुहोस्, गालको र of्गको संकेत र न्यूनतम उत्पादन र तपाईं सेट हुनुहुन्छ। तपाईले मेकअपलाई लेयर गर्नु आवश्यक पर्दैन, यसलाई तपाईंको दोस्रो छाला जस्तो बनाउनुहोस्।
ब्लश गालले दिन बचाउँछ
फ्लश गरिएको गाल भन्दा राम्रो केहि छैन। एक नग्न, कुनै मेकअप मेकअप लुक वा बोल्ड र उज्यालो मेकअपको साथ एक, गालामा र color्गको एक सानो ड्याब दुख्नेछैन। यहाँ एक समर्थ टिप यदि तपाईं सँधै जानुहुन्छ भने — lids र ओठहरूमा तपाईंको क्रीम ब्लश पनि क्लासिक मोनोटोन एक्सेस गर्न!
तिनीहरूलाई ल्याशहरू काम गर्नुहोस्
मस्कराको डबल कोटको साथ एम्पेड अप बारसका लागि अप्ट गर्नुहोस्। ब्लन्टका बदामको आकारका आँखा छन् जुन ठूला र ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला चिल्लाहरू संग देखिन्छन्। तपाईं फास्क वा ल्याश पाउडरको साथ आफ्नो ल्यासहरू कोप लगाउन मनपर्न सक्नुहुन्छ अझ बढी पम्प गरिएको बारेशको लागि मस्कारा लागू गर्नु अघि।
अर्थ टोनका लागि अप्ट
यदि OTT मेकअप देखिन्छ भने तपाइँको कुरा होईन, आँखाहरू र ओठहरूको लागि अर्थहीन, प्राकृतिक रues्गको लागि छनौट गर्नुहोस्। यि शेडहरूले काम नगरी यसलाई धेरै चर्को देखा पर्दछ। वैकल्पिक रूपमा, एउटा सुविधामा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् - बोल्ड ओठहरूसहित, ब्लन्ट सामान्यतया सूक्ष्म आँखाको खेल खेल्दछ यसलाई शान्त राख्न भयंकर रूपमा।
यो पनि पढ्नुहोस्: यहाँ कसरी ब्राउन आई मेकअप फिट Ace गर्ने। भूमि पेडनेकर
घरमा चम्किने छालाका लागि सुझावहरू
छिटो कपालको विकासको लागि सुझावहरू
अनुहार मा बेकिंग सोडा को उपयोग गर्दछ
औषधि कपाल झर्ना रोक्न